Izipho ezinhle kakhulu zeValentine yezobuchwepheshe | Izindaba zamagajethi
Izipho ezinhle kakhulu zeValentine yezobuchwepheshe
UMiguel Hernandez | 07/02/2021 10:00 | General
Njengoba sihlala silapha njalo sikusize ngalezi zinsuku zokuthenga ezithakazelisayo, futhi ukuthi uSuku lukaValentine lungezinye zalezo zikhathi ezinhle zokupha njengezipho. Senze iqoqo elincane lalokho esikholelwa ukuthi yizipho okufanele ube nazo uma ungumthandi wezobuchwepheshe noma ufuna nje ukukhombisa umlingani wakho ukuthi ulithanda kangakanani.
Yingakho Sikulethela imibono eminingi yezipho ngosuku lwezobuchwepheshe lwe-Valentine. Ungaphuthelwa ngoba yonke imikhiqizo inophawu lwethu lokuvunywa Ukuba yimikhiqizo esike sayihlaziya phambilini futhi yasinika imiphumela emangalisayo.
1 Ukwenza ngcono ngokusebenza ngocingo
2 Ukuze uqalise ekhaya elixhunyiwe noma kwi-Smart Home
3 Imultimedia nokuzijabulisa
Ukwenza ngcono ngokusebenza ngocingo
Ezokuxhumana ngocingo seziqalile ukuba yingxenye yosuku lwethu usuku nosuku ngemashi ephoqelelwe, iningi lenu lingase lingabi nawo "umsebenzi" ekhaya ovumelaniswe nazo zonke izidingo ezingadingwa okuthile okufana nalokhu. Uma ufuna okuthile okungabizi kakhulu, siqala ngekhibhodi ye-ODY engenantambo nepakethe yegundane kusuka kuTrust.
Amagundane athembekile namakhibhodi wokusebenza ngocingo, ingabe kufanelekile?
Nge- € 24,99 kuphela ungafinyelela uhlelo oluphelele, ngekhibhodi, Sinezinkinobho ezi-13 ezilungiselelwe ngaphambili zombili i-Microsoft Office nokuphathwa kwe-multimedia. Ngaphezu kwalokho, ikhibhodi nayo iyamelana nokuchitheka ngenkathi igundane lithule ngokwedlulele. Zombili zixhunywe echwebeni elifanayo le-USB.
Iphakethe lekhibhodi negundane ODY nguTrust> THOLA
Uma ufuna okuthile okungaphezulu kakhulu, siya ngqo kukhibhodi enhle kunazo zonke esake sazama ukuthandana nayo lapha kuwebhusayithi yethu kanye nesiteshi sethu. Sikhuluma ngeLogitech Craft.
Kuyacaca ukuthi asibhekene nomkhiqizo oshibhile, futhi kungenzeka ukuthi elinye lamakhibhodi aguqulelwe kakhulu endaweni yezobuchwepheshe esizoyithola emakethe. Njengamanje iyathengiswa ngama-euro ayi-115,90 e-Amazon. Ngaphandle kokungabaza, ukunikezwa kuhle kakhulu futhi ikhwalithi yomkhiqizo iyazikhulumela.
I-Logitech Craft ngentengo engcono kakhulu> THOLA
Ukuqapha nakho kungaba yindlela enhle yokunakekela ukubona kwethu nokwenza ngcono ukukhiqiza kwethu, ngakho-ke Sincoma iPhilips 273B9, engenye yokugcina esizihlolile futhi egxile kakhulu kulesi sigaba.
IPhilips 273B9, isilawuli esithuthukisa ukusebenza ngocingo [Ukuhlaziywa]
Uma sibheka ukuthi isebenza njenge-USB-C HUB, enikeza inkokhiso engama-60W kwi-laptop futhi ene-SmartErgoBase, Kubukeka njengokutshalwa kwemali okungaphezulu kokuhle. Kunzima ukuthola amanye ama-monitors analezi zici kanye nentengo elinganiselayo ekwaziyo ukuhlangabezana nezidingo zokusebenza ngocingo.
Ukuqapha kwePhilips 273B9> THOLA
Ukuze uqalise ekhaya elixhunyiwe noma kwi-Smart Home
Akukaze kube yisikhathi esibi sokuqala ku-Smart Home ngochungechunge lwemikhiqizo ehambelana ne-IoT. Ngokusobala kulokhu ukuma kwethu kokuqala kuya ngqo ku-Amazon Echo entsha.
Kubonakala kimi kuyindlela enhle yokuqala, ngoba kunalokho i-Echo Dot ibonakala kimi njengomphelelisi kulokhu. I-Amazon Echo neZigbee protocol ihambisana namalambu kaPhilips Hue neminye imikhiqizo ehambisana ne-Alexa bangenza impilo yakho ibe lula njengoba sikukhombisile kweyodwa yamavidiyo wethu wasekhaya.
I-Amazon Echo> THOLA
Imikhiqizo ye-Energy Sistem eyenzelwe i-smart home ibihlale ihamba nathi kuwebhusayithi yethu futhi bekungeke kube kuncane kule bhazaar. Indlela ekahle ukuthi ube newashi le-alamu, isikhulumi neshaja ehlakaniphile ene-Alexa etafuleni lethu, nansi i-Smart Speaker Wake Up evela kumkhiqizo waseSpain.
ikhwalithi ezwakalayo yanele ukugcwalisa igumbi ngendlela ejwayelekile, ukwakheka nezinto zokwakha kuphumelele impela futhi inani elikhulu lezinto abanazo ziyenza ibe ngumkhiqizo othakazelisa kakhulu. Ngokwethembeka, bekunzima kimi ukuthola amaphuzu amabi kwazise akunamadivayisi wokuqhathanisa nawo.
I-Energy Sistem Smart Speaker Vuka> THOLA
Ngokusobala i-IKEA yayizosicindezela kungekudala noma kamuva umkhiqizo esitolo sezindlu esixhunyiwe, futhi intuthuko yayo yakamuva ibe yinhle ngendlela emangalisayo. Lapha sinezimpumputhe ezinhle ze-KADRILJ futhi asikwazanga ukwaneliseka.
Qaphela kakhulu Ngoba uma uthenga eyodwa, uzogcina uyifaka endlini yonke, ikakhulukazi uma unohlu lwemikhiqizo ehambisana nephrothokholi yeZigbee i-IKEA enayo esitolo sayo futhi okusobala ukuthi ishibhe kunawo wonke emakethe ngenani lemali .
UKADRILJ oyimpumputhe kusuka ku-IKEA> THOLA
Siqala ngalokho okungangabazeki ukuthi umkhiqizo omuhle kakhulu wezwi nomuzi esiwuhlolile ku-2020, empeleni Ngokuvamile, kubonakala kimi umkhiqizo wezobuchwepheshe omuhle kakhulu odlule lapha ngonyaka odlule, sikhuluma ngeSonos Arc.
ISonos Arc kufanele ngokungangabazeki imbangi yokushaya ngaphakathi kwemigoqo yomsindo, sinokuguquguquka, umsindo webanga le-premium, ukuxhumana nezici ezihlakaniphile. ISonos iphinde yazama ama-soundbar nge-Arc yayo futhi bazocindezelwa kanzima ukuyimela.
I-Sonos Arc> THOLA
Manje sikhuluma kancane ngama-headphone, uma ucacile ngokuya ebangeni "eliphezulu kakhulu", okuhle kakhulu esakuvivinya ngo-2020 kwakuyiHuawei FreeBuds Pro, ngaphandle kokungabaza.
IHuawei FreeBuds Pro> THOLA
Nokho, sesifinyelele imikhiqizo emihle ngezinga labo lekhwalithi / lentengo njengeXellence by X by Kygo nayo ene-ANC nomsindo omangalisayo.
Xellence ngu X nguKygo, nge-ANC nomsindo omangalisayo
Manje siphendukela komunye umkhiqizo obonakala ngathi uyinto yakudala futhi okungafanele ukuthi ulahlekile ekhaya lakho, ikakhulukazi uma ufuna ukusebenzisa ithelevishini yakho phambili. I-Amazon Fire TV Cube ingumkhiqizo oyindilinga kakhulu ukusetha isikhungo esihle semultimedia ekhaya lakho nangentengo elinganiselayo.
Kodwa-ke, akufanele ushiye ngemuva i-Amazon Fire TV Stick, omunye umkhiqizo ngenani elingenakulinganiswa elenza okufanayo, kodwa ngamandla amancane kancane futhi ngokusobala ngesisombululo se-Full HD esiphezulu.
Ithenge ngentengo engcono> THOLA
Ekugcineni sincoma iKobo Nia, omunye wama-eReaders ahamba phambili ngentengo elinganiselayo esiyibuyekezile muva nje. Lokhu kungukuphikisana ngqo ne-Amazon Kindle eyisisekelo esibuye sayibuyekeza lapha ngezikhathi ezingaphezu kwesisodwa.
Siyethemba ukuthi uzithandile izincomo zethu zokuthenga ngoSuku Lwezithandani nokuthi ungakhohlwa ukuthi e-Actualidad Gadget sihlale silapha ukuzokusiza.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izipho ezinhle kakhulu zeValentine yezobuchwepheshe
Ungayilanda Kanjani iPhotomath ye-PC Mahhala (inguqulo yakamuva)
Ungayisusa kanjani i-watermark esithombeni nalezi zinhlelo